Chelsea oo Barcelona dardartey lugna la gashay Final-ka Champions League-ga – SBC
Chelsea oo Barcelona dardartey lugna la gashay Final-ka Champions League-ga
Posted by editor on April 18, 2012 Comments
Chelsea ayaa guul caaqibo leh caawa ka gaartey lugtii koowaad Semi-final-ka Champions League-ga ka dib markii ay gool iyo waxba ay ku sagootisay kooxda Barcelona oo marti u aheyd iyadoo lug la gashay Final-ka Champions League-ga.
Gool caaqibo leh oo ahaa halka weerar shaqaba Barcelona tagey ayaa xidiga qaarada Afrika ka soo jeeda Didier Drogba oo bishii hore ee March ay u buuxsantey da’dad 34 sano wuxuu si xarago leh u dhinac mariyey goolhayaha Barcelona Victor Valdes, goolkaasi oo uu dhaliyey Drogba 2-dii daqiiqo ee lagu darey qaybtii hore ee ciyaarta.
Goolka uu dhaliyey Drogba ayaa ku yimid kubada laacibka khadka dhexe ee reer England Frank Lampard uu ka xadey laacibka aduunka Lionel Messi isagoo kubadaasi u dhigay Ramires oo isaguna kubadaasi u sii baasay Drogba sidaasina uu shabaqa kula hubsadey.
Chelsea inta badan maamulka iyo awooda ciyaarta waa laga haystey waxaase ay ku fadhiday inaan gurigeeda gool lagaga dhalin taasi oo ah guusha ugu weyn ee Champions League-ga lagu xisaabto.
Kooxda reer Catalan waxaa nasiibku u diiday isku dayo fara badan oo gool ay ku dhalin kareen kuwaasi oo ay laadeen Alexis Sanchez,,Cesc Fabregas, halka Lionel Messi & Carles Puyol kubada madaxa ah uu ka badbaadiyey goolka gool ilaaliyaha kooxda Chelsea Peter Cech.
Labada kooxood waxay kulmi doonaan Talaadada inagu soo aadan iyadoo kooxda reer London ay u safri doonto magaalada Barcelona iyadoo xooga saareysa in ay ilaashato rajadeeda ku aadan inay u gudubto final-ka Champions League-ga ee bisha May ee soo socota ka dhici doona magaalada Munich ee dalka Jarmalka.
Kulankan oo haa mid aad u adag wacdarihgii dhacay iyo goolkii Chelsea link-ga video-ga hoose ka daawo.
HALKAN RIIX LIVE SPORTS